10 Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 20/12/2019)
Europe bụ kacha mma ebe maka a ihunanya obodo getaway. Otú ọ dị, na ọ bụ nnukwu ebe, na ị pụrụ iji warara ya ala. Ọ dabara nke ọma, e nwere ọtụtụ na-amasị banyere Germany, karịsịa ya ihunanya obodo. Ọ gaghị onye ị hụrụ n'anya na a na njem ha ga-echefu? Iji nyere gị aka ikpebi ebe aga, ebe a na- 10 ihunanya obodo ileta na Germany:
A Ihunanya City: Rothenburg Ob der Tauber
Rothenburg bụ mbụ anyị na ndepụta nke Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany, Ọ bụ a zuru okè fairytale obodo na-adọta ọtụtụ nde ọbịa kwa afọ. Otú ọ dị, mgbe ị gara, ị ga-ahụ ihe mere o ji na-ewu ewu. Tọrọ ntọala ochie ụfọdụ, emenye ndị imagery nke imerime cartoons na fim, Rothenburg bụ a obodo na a Ihunanya obodo gị ga-echefu.
Berlin na Rothenburg Ob der Tauber Ụgbọ oloko
Stuttgart na Rothenburg Ob der Tauber Ụgbọ oloko
Munich na Rothenburg Ob der Tauber Ụgbọ oloko
Frankfurt ka Rothenburg Ob der Tauber Ụgbọ oloko
A Ihunanya City: Bamberg
Bamberg bụ German obodo nke asaa ukwu na ugwu nta, dị nnọọ ka Rome na Italy. Na dị nnọọ ka Rome, a ihunanya obodo jupụtara ọmarịcha akụkọ ihe mere eme ije na echiche ahụ ga-ekpochapụ unu ụkwụ gị. Ihe ọzọ bụ na, Bamberg nwere ya "Little Venice" district, nke awade a ohere iji gondola ride.
Nuremberg na Bamberg Ụgbọ oloko
Frankfurt na Bamberg Ụgbọ oloko
Stuttgart na Bamberg Ụgbọ oloko
Dresden na Bamberg Ụgbọ oloko
A Ihunanya City Na Germany: Monschau
Obodo ahụ nso nke Aachen, Monschau nwere ya niile: ọmarịcha echiche, a asọfe, a osimiri, na a ebube nnukwu ụlọ, na romance. Gịnị mere ka ọ a zuru okè Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany ebe maka ọdịdị hụrụ bụ ya ìgwè hiking ụzọ ụkwụ na ugwu nta. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na gaa na oyi, ị ga-enwe ike inwe ya ọdịnala Christmas ahịa.
Meissen etiede ke Elbe osimiri, na na ọ bụ ndị kasị ochie obodo nile nke Saxony na A Ihunanya City. The Elbe ndagwurugwu ahụ bụ ihe lends Meissen dị otú ahụ a ihunanya mkpesa. Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ na-ahụ, dị ka ya mara mma-acha uhie uhie n'elu ụlọ ndị na- reminiscent nke Prague. Ọzọkwa, ndị hụrụ ije nwere ike na-enwe ịgagharị a ebube Gothic katidral na a narị afọ nke 16 na nnukwu ụlọ.
Berlin na Meissen Ụgbọ oloko
Freiberg ka Meissen Ụgbọ oloko
Cottbus ka Meissen Ụgbọ oloko
Chemnitz ka Meissen Ụgbọ oloko
Big Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany: Heidelberg
Heidelberg bụ zuru okè ebe ọ bụrụ na ị chọrọ ka obi na mmụọ nke Romanticism na-enwe mmasi nke obodo a. Ihe ọzọ bụ na, ị nwere ike inyocha na nnukwu ụlọ mkpọmkpọ ebe nke dị n'ugwu na-a stroll tinyere Neckar osimiri na onye ị hụrụ n'anya.
Frankfurt ka Heidelberg Ụgbọ oloko
Stuttgart na Heidelberg Ụgbọ oloko
Nuremberg na Heidelberg Ụgbọ oloko
Bonn na Heidelberg Ụgbọ oloko
Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany – Freiburg
Ọ bụrụ na ị na-achọ a anwụ na-acha mgbe achọ Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany, anya ọ gara n'ihu karịa Freiburg, na nsọtụ nke ama Black Forest. Na nso n'ókè nke Switzerland, i nwere ike na-atụ anya ọmarịcha echiche na ebube iyi ná mpụga obodo. Freiburg bụ zuru okè ileta nile n'afọ.
Sea-acha anụnụ anụnụ na mmiri nke Bodensee Lake na na Alps gbaagburugburu Lindau. Ebe i nwere ike na-enwe ihe ndị dị ebube echiche, nakwa dị ka dị iche iche mmiri egwuregwu na ụgbọ mmiri njem, na ụfọdụ Romance. Ọzọkwa, Lindau bụ mara mma na oyi, karịsịa mgbe Bodensee freezes.
Konstanz ka Lindau Ụgbọ oloko
Memmingen ka Lindau Ụgbọ oloko
Biberach ka Lindau Ụgbọ oloko
Ulm ka Lindau Ụgbọ oloko
Trier bụ obodo kasị ochie na Germany, Ọ bụ na ndepụta nke Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany, ma nnọọ otú ị maara na ọ bụ nnọọ nso Luxembourg, ọ nēguzo bịara n'ikperé mmiri nke Moselle osimiri n'ihi na ihe karịrị puku afọ abụọ. Iji maa atụ na ya mara mma, Trier obụrede mbụre Roman ije, nakwa dị ka ochie na Gothic ụlọ. Yabụ, a pụrụ iche ngwakọta na-eme ka Trier a ezi ihe ijuanya.
Koblenz na Trier Ụgbọ oloko
Frankfurt na Trier Ụgbọ oloko
Mainz na Trier Ụgbọ oloko
Stuttgart na Trier Ụgbọ oloko
A Ihunanya City aha ya bụ: Cochem
Ọ bụrụ na ị na-aga na a osimiri na nrughari na Germany, jide n'aka na-agụnye Cochem dị ka otu n'ime gị akwụsị. ubi-vine na a breathtaking 11th narị afọ nnukwu ụlọ bụ isi atụmatụ nke a osimiri obodo na a nnọọ ihunanya obodo.
Frankfurt ka Cochem Ụgbọ oloko
Bonn na Cochem Ụgbọ oloko
Cologne ka Cochem Ụgbọ oloko
Stuttgart na Cochem Ụgbọ oloko
Ikpeazụ Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany – Quedlinburg
Nke a obere ochie obodo nwekwara ike-gua na ndepụta nke Ihunanya Ọnọdụ Iji Gị Na Germany, obodo a ga-ume gị pụọ na ya maa mma cobblestone n'okporo ámá na quaint ụlọ. Ọzọkwa, akụkọ ihe mere eme na ndị hụrụ ga na-enwe ịgagharị ya pụrụ iche akụkọ ihe mere eme. Dị ka na-ezu ike n'ebe King Heinrich m, Quedlinburg bụ ịrịba obodo.
Magdeburg na Quedlinburg Ụgbọ oloko
Bielefeld ka Quedlinburg Ụgbọ oloko
Ị kpebiri nke Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany na ị chọrọ iji bulie dị ka gị ọzọ getaway? Atụmatụ a njem otu n'ime 10 kasị ihunanya obodo na Germany na AKWỤKWỌ gị Train Tickets na oge na Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Ihunanya Ọnọdụ ileta na Germany” na na gị na saịtị? ị nwere ike ma buru anyị na foto na ederede na dị nnọọ na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fromantic-cities-visit-germany%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#germanytravel europetravel eurotrip ihunanya ihunanya trainjourney traintip Train Travel